Clam Elite, safidy hafa miaraka amin'ny ANC, nahazo alalana tamin'i Fresh´n Rebel | Vaovao Gadget
Clam Elite, safidy hafa miaraka amin'ny ANC nahazo alalana an'i Fresh'n Rebel
Miguel Hernandez | 10/06/2021 11:30 | General, hevitra
Fanafoanana ny tabataba mavitrika, fantatra amin'ny anarana hoe ANC noho ny fanafohezana azy amin'ny teny Anglisy, dia lasa fitakian'ireo mpanamboatra vokatra audio izay nanjary tsy milamina intsony izao, izay nitranga tamin'ny famoahana vaovao an'ny Fresh'n Rebel, orinasa iray izay narahinay hatrany, ka izahay tsy afaka tsy hahita ilay fotoana nifanarahana.
Atolotray anao ny Clam Elite vaovao avy amin'ny Fresh´n Rebel, headset miaraka amin'ny ANC ary fahagagana ara-teknika maro hafa. Mijanona aminay ary fantaro izay rehetra tokony ho fantatrao momba ny telefaona sofina vaovao Fresh'n Rebel.
3 Fanafoanana ny tabataba sy ny maody
4 Fampiharana Sound manokana sy kalitaon'ny feo
Fresh´n Rebel dia mijanona ho marina amin'ny fotony, na amin'ny lafiny loko na fitaovana. Ireo Clam Elite dia manaraka ny firindran'ny loko, manolotra amin'ny loko mainty, fotsy sy manga. Toy izany koa, manana andiana plastika sy trims izay maka tahaka ny vy. Na izany aza, toa tsy manimba ny fananganana ankapobeny izany, izay mahatsapa ho matanjaka sy manana kalitao. Na eo aza izany, noho ny plastika dia mihatsara amin'ny haavon'ny hazavana. Ireo Clam Elite ireo dia tsy mavesatra amin'ny fampiasana mitohy amin'ny zavatra niainantsika.
Ao anatin'izany ny tariby USB-C voahidy nylon
Ahitana seranan-tsambo 3,5mm Jack sy tariby AUX nasiana rojo vy
Ahitana kitapo mitondra
Ny fehikibo dia vita amin'ny lamba ary misy tadim-pahatsiarovana ao anatiny mba hahamora ny hametrahana azy. Mazava ho azy fa manana rafitra teleskopika iraisana isika amin'ity karazana headset ity handraisana ny lohantsika. Amin'ny lafiny iray, ny headphones izay manarona tanteraka ny sofina dia manana fonosana vita amin'ny hoditra maloto, mihodina miaraka amin'ny fahalalahana mihetsika ary azo ovaina ihany koa.
Ao amin'ity fizarana ity hitanay ny takelaka fikasihana teo amin'ny fitaovam-pandrenesana, ary koa bokotra fampandehanana / fanafoanana ANC, ny bokotra ON / OFF ary ny seranan-tsambo USB-C izay hampiasainay ny fitaovana. Ny lanjany dia 260 grama fotsiny.
Mazava ho azy, amin'ny maha headphones tsy misy tariby azy ireo, dia manana Bluetooth amin'ny fifandraisana amin'ilay fitaovana isika, na dia azontsika atao aza ny manararaotra ireo toetra mampiavaka ny rindrambaiko manokana izay horesahintsika avy eo. Amin'ity fizarana ity dia manana ny Clam Elite an'ny Fresh´n Rebel Fanafoanana ny tabataba mavitrika nomerika, manolotra traikefa ambony noho ny teôria. Izy io dia miaraka amina andian-tsarimihetsika izay horesahintsika ihany koa avy eo.
Manana seranan-tsambo USB-C isika ahafahantsika mameno ny headphones sy izany Manana fahaleovan-tena mandritra ny 40 ora amin'ny famerenana mozika izy ireo, izay hahena 30 ora rehefa ampodinay ny fanafoanana ny tabataba. Ny fiampangana feno an'ity Clam Elite avy any Fresh'n rebelde ity dia haharitra adiny efatra eo ho eo, ka afaka mamaritra fa tsy manana karazana sarany haingana. Na eo aza izany dia miparitaka be ny fizakantena ka zara raha mahita tranga iray ahafahantsika mitaky izany. Na izany aza, Satria manana seranan-tsambo Jack 3,5mm isika, azontsika atao ny mampiasa azy ireo amin'ny fomba nentim-paharazana raha toa ka lany ny fizakantenantsika.
Fanafoanana ny tabataba sy ny maody
Amin'ity tranga ity Fresh'n Rebel Nanapa-kevitra ny hanatsara ny kinovan'ny Clam miaraka amin'ity maodely "Elite" ity ary noho izany dia nanolotra fanafoanana ny tabataba nomerika izahay izay mampanantena hahatratra 36 dBi. Nandritra ny fitsapana nataonay dia hita fa ampy izy, farafaharatsiny amin'ny fomba fanafoanana ny tabataba. Miova ny toe-javatra rehefa mifindra amin'ny maody hafa isika.
Fanafoanana ny tabataba mahazatra: Hofoanany ny tabataba rehetra miaraka amin'ny fahafaha-avo indrindra natolotry ny Clam Elite hatramin'ny 36 dbi
Mode manodidina: Io fomba io dia hanafoana ny tabataba manelingelina sy miverimberina indrindra fa hahafahantsika maka sary na fampandrenesana avy any ivelany.
Amin'ny tranga Ambient Mode dia hitantsika ny fomba mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny feon'ny mozika henontsika. Na dia mijoro tsara aza izy dia tsy dia tiako loatra ny maody 'mangarahara' toy izany, mandeha tsara ny fanafoanana ny tabataba ary mamporisika ahy hampiasa izany amin'ny tontolo azo antoka. Na izany aza, Raha dinihina ny maha-malaza ny muffs amin'ny sofinao, dia manana fitokana-monina tsara mihitsy aza isika rehefa tsy ampandehananay ity rindrambaiko ity.
Fampiharana Sound manokana sy kalitaon'ny feo
Ireto Clam Elite ireto dia miaraka amina fampiasa tsy manam-paharoa dia ny manamboatra ny karazana feo amin'ny alàlan'ny rindranasa izay misy maimaimpoana ho an'ny iOS sy Android. Raha vantany vao ampifanarahinay ny Clam Elite-tsika, zavatra somary tsotra amin'ny alàlan'ny fihazonana ny bokotra ON / OFF, hisokatra ny rafitra calibration izay haharitra telo minitra eo ho eo ary tena intuitive izany. Vantany vao vita ny fangatahana dia hapetraka ao amin'ny Clam Elite ny mombamomba antsika izay tsy hotehirizina amin'ny telefaona fa amin'ny headphones ihany, Azontsika atao ny mamantatra sy manova isaky ny mila tsy very io toerana io rehefa ampiasaintsika izy ireo.
Kitiho ny rafitra tontonana hitantanana ny atiny multimedia sy ny habetsahan'ny haino aman-jery
Famantarana ny fametrahana hametraka mozika ho azy
Amin'ny lafiny iray, samy hafa be ny kalitaon'ny feo raha toa ka efa nampifanitsy azy ireo isika na tsia. Raha ny amiko dia hitako ny fisian'ny beso be loatra aorian'ny fanamafisana, noho izany dia aleoko ny maody mahazatra, ndao lazaina fa tonga tsara kalibrato toy ny mahazatra izy ireo. Tsy fantatray fa manana kaody aptX izy ireo. Manolotra fampisehoana tsara aminay amin'ny bas sy mids izy ireo, mazava ho azy fa mijaly noho ny haavo izy ireo, indrindra raha miala amin'ny mozika ara-barotra isika, toy ny tranga amin'ny ankamaroan'ny headphones amin'ity karazana ity. Ny tsy fivadihan'ny feo dia simba kely rehefa mampihetsika ny maody fanafoanana mavitrika isika, zavatra iray izay ao anatin'ny masontsivana mahazatra ihany koa.
Hihaona amin'ireo mpikomy Fresh'n isika vokatra boribory somary boribory, ny heriny dia misongadina amin'ireo malemy, indrindra satria ny traikefa amin'ny fifandraisana, ny fanoratana ary ny fampiononana dia mifanaraka amin'ny kalitaon'ny feo, na dia tsy eo amin'ny sehatra premium aza isika, dia manome fenitra avo lenta ho an'ireo mpampiasa. afa-po. Ny vidin'ny fandefasana dia 199,99 euro amin'ny isa amidy mahazatra toa an'i Amazon, El Corte Inglés ary Fnac.
Navoaka tamin'ny: 10 junio 2021
Fanovana farany: 9 junio 2021
Fitaovana sy famolavolana nohazavaina tsara
Mety ho fanitsiana ny audio amin'ny fampiharana
Fifandraisana tsara sy traikefa amin'ny asa
Azo hatsaraina ny Mode Ambient
Afaka manome fahatsapana fahamendrehana kely izy ireo noho ny hazavana
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » Clam Elite, safidy hafa miaraka amin'ny ANC nahazo alalana an'i Fresh'n Rebel
Amazon Echo Show 10, efijery, feo ary fanavaozana, mendrika ve izany?